Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Sports » Expo 2020 Dubai waxay ka heshaa gaarsiin gaar ah US Open
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Sports • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Meel ka baxsan New York, bacaha tennis -ka ayaa lagu qaybin doonaa qaar ka mid ah irdaha Imaraadka ee Maraykanka.
Don Victor Mooney wuxuu ahaa cayaaryahankii tennis -ka Madow ee ugu horreeyey ee ku guuleysta koobab keli ah US Open, Australian Open iyo Wimbledon.
Don Victor Mooney wuxuu aruurinayaa jaakadaha tennis -ka, kubbadaha iyo qalabka dugsiga ee carruurta inta lagu jiro US Open.
Sababtoo ah COVID-19 masiibada cusub ee Expo 2020 taariikhaha Dubai waa Oktoobar 1, 2021-Maarso 31, 2022.
Wuxuu doon ku dhex maray badda Atlantic wuxuuna baaskiil ku maray Emirates. Hadda, Don Victor Mooney, oo ah Madaxweynaha Mashruuca Resilience HR 1242, ayaa aruurinaya jaakadaha tennis -ka, kubbadaha, iyo agabka dugsiga ee carruurta inta lagu jiro US Open. Ololaha ayaa loogu magac daray: Hawlgalka Arthur Ashe. Arthur Ashe wuxuu ku guuleystay awoodda buugaagta iyo maxkamadda teniska. Ashe wuxuu ahaa cayaaryahankii ugu horreeyay ee tennis -ka Madowga ah ee ku guuleysta koobab keli ah US Open, Australian Open iyo Wimbledon.
Ololaha ururinta iyo xirxirida wuxuu dhammaan doonaa 12ka Sebtembar. New York dibaddeeda, bacaha tennis -ka waxaa lagu qaybin doonaa qaar ka mid ah irdaha Imaraadka ee Maraykanka. Boorsada tennis -ka ee ugu dambeysa waxaa lagu bixin doonaa Dubai Expo 2020, oo furmi doonta Oktoobar 1, 2021.
If Emirates shaqaalaha qolku waxay ku leeyihiin New York joogitaan dheer, waa lagu soo dhaweynayaa inay naga caawiyaan xirxirida bacaha tennis -ka qaarkood, ayuu yiri Mooney.
Expo 2020 waxaa loo qorsheeyay inuu noqdo Bandhigga Adduunka ee ay martigelin doonto Dubai ee Imaaraadka Carabta, oo markii hore loo qorsheeyay 20 Oktoobar 2020-10 Abriil 2021. Si kastaba ha noqotee, sababtuna tahay masiibada COVID-19 ee Imaaraadka Carabta, taariikhaha cusub waa Oktoobar 1 , 2021 - Maarso 31, 2022.
Coral Vita oo fadhigeedu yahay Bahamas ayaa ku guulaystay amiirkii mudnaa ...